Ra’iisal Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya oo ka Dareen Celiyey Inuu Ku Guulaystay Kursiga Koowaad ee Xildhibaanada Waqooyiga – WARSOOR
Muqdisho – (warsoor) – Ra’iisal Wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka ee Soomaaliya Md. Maxamed Cumar Carte oo u tartamaayey xildhibaanadda labada Aqal ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu ku fursan yahay inuu ku guulaystay kaalinta 1-aad ee xildhibaanadda Waqooyiga.
Xildhibaan Maxamed oo uga mahadnaqay dadkii doortay ayaa yidhi, “Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar; Illaah baa baxsha darjada kana qaada cidda uu doono. Waxaan u mahadcelinayaa dhamaan ergada ii doortay inaan magacooda ku matelo golaha shacabka, waxa aan u ballanqaadayaa inaan sharaftooda kor u qaado kana shaqeeyo danaha dadka Soomaaliyeed”.
Ra’iisal Wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka ee Soomaaliya Md. Maxamed Cumar Carte ayaa ka hadlay hawsha u taala iyo waxa looga baahan yahay inuu qabto waxaanu yidhi, “Dadka Soomaaliyeed waxa ay mudan yihiin una baahan yihiin dal nabdoon oo barwaaqo ah; waa taa balanta aan ku shaqeyn doono intii karaankeyga ah”.